အိမ်တွင်းရေး၊ ဇန်နဝါရီ (Tun Win Nyein) | MoeMaKa Burmese News & Media
ခင်ဝမ်းအတွက်ကဗျာ - (Aung Cheint)
ကိုပွေး - သွေးစာ
သျှ င် မိုးေ ပြး- ဇာ တ် လ မ်းတွဲ
လင်းသက်ငြိ်မ် ● မျက်နှာဖုံးစွပ်ကမ္ဘာ
ထွန်းဝင်းငြိမ်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၄
မတော်မတရားဖြစ်နေတဲ့ ခေတ် ။
ဒေါသနဲ့ ကန်းမနေကြနဲ့ ။
ပြာပုံကို ဘာ ဘုံ ထင်နေလဲ မသိ ။
တအိအိ ပြိုနေတဲ့ အမှောင်မှာ
”အနန္တသူရိယ”ကို မုန်းသတဲ့ ။
မိတ်ဆွေတို့ . . .
ဘယ်လိုသူတွေ ဂုဏ်ယူချင်ပါသလဲ ။
ငါ . . . . . အော့နှလုံး နာမိတယ် ။ ။
(၃၁ .၁ .၂ဝ၁၄)
(Photo credit – http://annecarolinedrake.files.wordpress.com/2009/03/peace-dove.jpg?w=300&h=237 )